XOG Turkiga Iyo Yurub oo Hanjabad Iswaydaar Sadey Turkiga Maraakiib Hor leh U Diray Giriiga - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Turkiga Iyo Yurub oo Hanjabad Iswaydaar Sadey Turkiga Maraakiib Hor leh U Diray Giriiga
Turkiga ayaa sheegay inay go’aansadeen inay kordhiyaan muddada hawlgallada sahaminta ee ay ka wadaan markabkooda “Oruj Reis” bariga Mediterranean illaa afaraad ee bisha soo socota ee November.
Midowga Yurub wuxuu ugu hanjabay Ankara cunaqabateyn hadii ay sii wado howlaha sahaminta ee dhulka lagu muransan yahay ee Griiga.
Ogeysiis ay soo saareen Ciidamada Badda ee Turkiga xilli dambe oo shalay, Sabti ahayd, ayaa lagu muujiyey in “Aruj Reis” marka lagu daro maraakiibta taageerada “Ataman” iyo “Genghis Khan” ay sii wadi doonaan ka shaqaynta aag dhanka koonfurta ka xigta jasiiradda Griigga ee Rhodes illaa afraad. bisha soo socota, iyada oo la raadinayo kheyraadka dabiiciga ah. , Iyadoo la tixraacayo saliida iyo gaaska dabiiciga ah.
Ogaysiis hore oo loo diray Ciidanka Badda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in shaqada sahaminta ee aagga ay socon doonto illaa 27 Oktoobar.
Midowga Yurub wuxuu rumeysan yahay in howlaha sii socoshada ee sahaminta ee Turkiga uu sii xumeyn doono xiisadda ka dhex taagan xiriirka labada dhinac, waxayna Athens sheegtay in howlgaladan ay ka dhacayaan aagagooda badda, halka Ankara ay ku adkeysaneyso inay ka sameyso sahaminta badda dhexdeeda qafiskeeda dhexe.
Khilaafka ayaa ka dhex qarxay Giriiga iyo Turkiga bishii Ogosto ee la soo dhaafay ka dib markii Ankara ay u dirtay markab “Aruj Reis” biyaha Giriigga iyo Qubrus ay sheeganayaan inay xaq u leeyihiin. Ankara ayaa markabkii kala baxday bishii la soo dhaafay si ay u sameyso dayactir, si loogu banneeyo diblomaasiyadda ka hor shir madaxeedka Midowga Yurub intii uu socday Qubrus oo doonayay in cunaqabateyn lagu soo rogo Turkiga, laakiin Ankara ayaa soo celisay markabkii bishan, taasoo keentay falcelin caro leh oo ka timid Griiga, Faransiiska iyo Jarmalka.
Wakaaladda Anadolu Agency waxay sheegtay in markabka “Aruj Reis” uu ka mid yahay maraakiibta cilmi baarista dhifka ku ah adduunka. Waa mid si buuxda u qalabeysan oo ujeedo badan leh, si ay u sameyn karto sahaminta dhul gariirka iyo magnetic ee laba-geesoodka ah iyo saddex-geesoodka ah. Waxay sidoo kale samayn kartaa sahan dhul-gariir oo saddex-geesood ah illaa qoto dheer oo ah 8 kun oo mitir, iyo hawlgallo sahamin ah. Dhul gariirka laba-geesoodka ah illaa qoto dheer 15 kun oo mitir.
Turkiga ayaa u soo diray tiro maraakiib ah inay soo baaraan shidaalka iyo gaaska ku jira gobolada bariga Mediterranean ee ay Qubrus sheegtay inay ku hoos jirto madaxbanaanideeda, oo Ankara ay diiday.